ညီလင်းသစ်: စားကျက်မြေမှာ တစ်ညတာ ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 19.8.13
ဟေး ပျော်စရာကြီးနော်၊၊ စိမ်းနေတဲ့ မြက်ခင်းတွေမြင်ရတာ မျက်စိကိုအေးပြီး ရင်ထဲပါ အေးသွားတယ်၊၊ Croûte au fromage ဆိုတာကြီး စားဖူးချင်တယ်၊၊ ကျေးဇူးအများကြီးပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ :)
ကျေးဇူးပါ အကို.... သဘာဝရဲ့ ရနံ၊ တောတောင်တွေရဲ့ ရနံတွေ အပြည့်အ၀ကြီးကို ရှုရှိုက်လိုက်ရတယ်...
ညစာကိုသဘောကျပေမယ့် ကျမဆိုစားတတ်မှာမဟုတ်ဘူး ။ပေါင်မုန့်ကိုဝိုင်နှစ်တော့ ......
လှလွန်းလို့ ချစ်ချစ်ကုိုအတင်းခေါ်ပြီး ပြရသေးတယ်။
လျှပ်စစ်မီးရောင်မမြင်ရတဲ့နေရာကနေကြယ်တွေကြည့်ရတာမှအရမ်းကောင်းတာနော်။ တဲလေးနဲ့ ပုံမှာသိပ်မမှောင်သေးတာတောင်ကြယ်တွေကတော်တော်စုံနေပြီနော်။
နောက်တစ်ခါသွားရင်အရုိုင်းပန်းလေးတွေ ကလို့ စ်အပ် ရုိုက်ခဲ့ပေးပါလား။
ကျမအဲလို အရုိုင်းပန်းသေးသေးလေးတွေကိုသေသေချာချာအနီးကပ်ကြည့်ရတာသဘောကျလို့ ပါ။ ကျေးဇူး။
တစ်ရက်နဲ့တစ်ညခရီးလေးကို မောင်ညီလင်းနဲ့အတူ စာဖတ်သူတို့ကို လိုက်ပို့နေသလိုပါပဲ... မနေ့က ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ထဲက စနိုးတောင်ကြီးကို ကြည့်ရင်း မောင်ညီလင်းတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ပို့စ်ဟောင်းလေးဆီ စိတ်ရောက်သွားသေးတယ် :)
ဆွစ်တောင်တန်းတွေပေါ်က စားကျက်မြေကို ညီလင်းတို့မိသားစုနဲ့အတူတစ်ညအိပ်ရောက်ဖူးသွားပါပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်။ ကြယ်တွေစုံ တဲ့ညချမ်း အလှ မှာ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်နေ တဲ့မွန်ဂိုတဲလေးက အသက်ဝင်နေတယ်၊ အထီးကျန်ဆန်မနေဘူး။ ညီလင်းခရီးသွားနေသည်ကို အားကျလျက်-
ဒီလိုတောတောင်သဘာဝနဲ့ကင်းကွာနေတာ ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ...။ အစ်ကို့ပို့စ်တွေဖတ် ပုံတွေကိုကြည့်ရတာ လူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုခံစားရမြဲဖြစ်တတ်တာ စာရေးသူရဲ့ ကလောင်ထက်လို့လို့ပဲမှတ်ပါတယ်...း)
သားပုံ ပါမယ်ထင်နေတာ ။
အဲ့လို ခရီး ခဏခဏ ထွက်ချင်တာ ခုတော့ မထွက်ရပါဘူးးး ထွက်ရင်လည်းပျော်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး တစ်ယောက်တည်း ဦးလေးကြီးလို သားနဲ့ မယားနဲ့မဟုတ်တော့ နေရတာ ဘ၀မှာ ဟာတာတာကြီးရယ် ဆားမပါတဲ့ ဟင်းလိုပဲ မုန်းစရာကြီးးး အဟုတ် ။
အတော့်ကို သာယာတာပဲ...တောင်ပေါ်က ရွက်ဖျင်တဲ ကောက်ရိုးပုံမှာ တခါလောက် အိပ်ချင်စမ်းပါဘိ..း)
ကိုညီလင်းရေ ပုံတွေကိုမြင်ရတာ တကယ်သွားချင်မိပါတယ် အဆင်ပြေတဲ့တနေ့နေ့တော့ ရောက်ဖြစ်အောင်ကိုသွားအုန်းမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်......
So, this is an another place in Suisse where you can find the Yurts apart from Rochers De Naye?
အမြဲတမ်း ပုံမှန်လာလည်တဲ့ အတွက်ရော၊ အခု ကွန်မန့်လေး အတွက်ရော ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ...၊း)
ကျနော်ကလည်း လာအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျား...၊
Just go for it...! :)
ဝိုင်ထဲမှာ နှစ်ထားတယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း စားတဲ့အခါမှာတော့ ဝိုင်အနံ့ရော၊ အရသာရော မရှိတော့ပါဘူး၊ တချို့တွေလည်း ဝိုင်ထဲမနှစ်ဘဲ လုပ်ကြတယ်၊ ဥပမာ- ကလေးတွေ စားဖို့အတွက် ဆိုရင်လေ...၊ :)
အင်း.. ချစ်ချစ်တော့ စိတ်ညစ်သွား မလားပဲ၊း) အိုကေ.. နောက်တစ်ခါ တောင်ပေါ် ရောက်လို့ အရိုင်းပန်းလေးတွေ တွေ့ရင် (သတိလည်း ရရင်) ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ မယ်နော်၊း)
ဟုတ်... သတိတရ ရှိတာကျေးဇူးပါ တီတင့်ရေ....၊
“ညီလင်း ခရီးသွားနေသည်”... ဟားဟားဟား၊းD မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ..၊ ကိုလွင်မိုးက မူပိုင်ခွင့်နဲ့ လာပြီး တရားစွဲနေ ပါ့မယ်၊း) အမြဲတမ်း လာလာလည်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး..၊
ကွန်ပျူတာ အရှေ့ကနေ မခွာဘဲ ခရီးတွေကို ခေါ်သွားပေးနိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် ဝမ်းမြောက်စရာပေါ့ ညီမရေ...၊း)
တခါတလေ တစ်ယောက်ထဲကလည်း ကောင်းတာပဲဗျ..၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ရှိရင် ဘယ်သူ့မှ ငဲ့နေစရာ မလိုဘူး..၊း) စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါတဲ့ ဘဝ...၊း)
ဒါဆို ဆူနမ်တို့နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး တစ်ခေါက်လောက် အလည်လာခဲ့လေ...၊း)
ဒါပေါ့ဗျာ..၊ အလည် မရောက်နိုင်ဘူး ဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး၊ ကျနော် ကူညီနိုင်တာ ရှိရင်လည်း ပြောပါနော်...၊
Yes, indeed. Actually, there are quiteanumber of places where there are yurts. Another place with yurt I know is above Bex which you have to go beyond Rochers de Naye.
Photo တွေ က ကြည်စိမ့်နေတာပဲဗျာ ...
သဘာဝ ရဲ့ အလှတရားတွေ ကို ကြည့်ရတာအတွက် ... ကျေးဇူးပါ ... ကို ညီလင်းသစ် ရေ ...
တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေမယ့် ညလေးမှာ ကြယ်တွေကို အကြာကြီး ငေးကြည့်.....ပြီးတော့ ရွက်တဲလေးထဲ ၀င်ပြီး အနားယူ အိပ်စက်.....။။။။ မနက်နိုးလာတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အစားအစာလေးတွေစား......။။။။။။
၁ ပတ်လောက် စိတ်အေးလက်အေး အာ့လိုနေရာမျိုးလေးမှာ သွားနေလိုက်ချင်ပါရဲ့ .....။။း)
သိ င်္ဂါရ...
အဲဒါဆို ဒီကို ရောက်အောင်သာ လာခဲ့လေ..၊ လိုက်ပို့ပေး ပါ့မယ်..၊း)
သူလည်း တခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲ.. လှပတဲ့ သဘာဝ တောတောင်ရေမြေတွေ ရှိတဲ့သဘောပါပဲ ညီမရေ..။း)
ပို့စ် အသစ်တွေ အားလုံးပေါင်းဖတ်သွားတယ်။ လုပ်ချင်တာတွေ မှန်သမျှ အကောင်ထည်ဖော်ခွင့်ရတဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကိုညီရဲ့ဘ၀ကို သဘောကျတယ်။ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ မဒမ် ကိုညီ ကိုလည်း သဘောကျတယ်။ ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပီး ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလို ခံစားချက်လေး ပေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေအတွက် ကျေးးးးးးးးးးးဇူးပါရှင်။